AbakwaNokia bazisa ngokusesikweni iNokia 2 entsha nge- $ 115 | Iindaba zeGajethi
AbakwaNokia bazisa ngokusesikweni iNokia 2 entsha nge- $ 115
Imodeli entsha yakwaNokia sele ihanjisiwe ngokusemthethweni kwaye ayizami ukukhuphisana neemodeli ezintsha zeSamsung Samsung S8, i-iPhone X okanye iGoogle Pixel 2, iNokia 2 idlala kwenye iligi kwaye zinikezelwa kwimarike ukuze zikhuphisane neentshaba ezisezantsi ezikhoyo namhlanje.
Asithandabuzi ukuba umsebenzi owenziwa yi-HMD Global ngeNokia ulungile ngenene, uyabiza, uyacotha kodwa ulungile. Abazami ukukhuphisana kwintengiso yee-smartphones ezinamandla kunye neenkcazo zamva nje, balandela isicwangciso-nkqubo ngamanyathelo esinokuphumelela kakhulu kwixesha elide ngezi zixhobo zokungena kwinqanaba.
Kule meko, imodeli iboniswa ngokuzimela kweentsuku ezimbini ngokwenkampani ngokwayo kunye neklasi yeklasi yeGorilla ekwi-intshi ezintlanu. Yintoni egqithisile khwela apIprosesa ye-Snapdragon 212 1.3GHz, inayo 1GB RAM kunye 8GB yokugcina yangaphakathi iyandiswa nge-microSD. Iphalethi yombala yenziwe lula ukuba ibe yimibala emithathu ekhoyo: Pewter / Mnyama (ngwevu / mnyama), Pewter / Mhlophe (ngwevu / mhlophe) kunye neCopper / Mnyama (ubhedu / mnyama). Inkqubo yokusebenza I-Android Nougat yemvelaphi, kodwa inkampani sele ibhengezile ukuba izakuhlaziya kwi-Android Oreo kungekudala.
Le modeli intsha yongeza kuluhlu lwezixhobo zexabiso eliphantsi ezisungulwa yinkampani kwaye ngokucacileyo iphambi kweNokia 3310, ebiza malunga ne- $ 60. Intloko kunye nenyathelo elibalulekileyo kwi-MWC edlulileyo, Ngomdlalo omangalisayo, kwathiwa iNokia ibuyile kwaye kubonakala ngathi kuthi ukuba le nkampani sele izelwe ngokutsha ngoku.
Kufuneka siyicinge lonto INokia ibonakala ngathi iza kutshabalala kwaye ngamanye amaxesha uninzi lwethu luyibonile ingcwatywa, ngoku uphawu luyasokola kakhulu ukubuyela kwimakethi ye-smartphone kwaye asithandabuzi ukuba iya kuba nakho ukwenza oko okwethutyana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » AbakwaNokia bazisa ngokusesikweni iNokia 2 entsha nge- $ 115